Inona no atao hoe fahalalahana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Inona no atao hoe fahalalahana?
Vao tsy ela akory izay no nitsidika ny zanakay vavy sy ny fianakaviany. Avy eo novakiako tao anaty lahatsoratra iray ilay fehezan-teny: "Ny fahalalahana dia tsy tsy fisian'ny teritery, fa ny fahaizana manao raha tsy noho ny fitiavana ny namana" (Factum 4/09/49). Ny fahalalahana dia mihoatra ny tsy fisian'ny fameperana!
Efa naheno toriteny momba ny fahafahana isika, na efa nianatra ity lohahevitra ity ihany. Ny zavatra manokana ho ahy amin'ity fanambarana ity, na izany aza dia ny fahalalahana mifandray amin'ny fanafoanana. Rehefa noeritreretintsika ny fahalalahana amin'ny ankapobeny dia tsy misy ifandraisany amin'ny famoahana azy izany. Mifanohitra amin'izany, ny tsy fisian'ny fahalalahana dia ampitahaina amin'ny famoahana azy. Mahatsapa ho voafetra amin'ny fahalalahana isika raha tsy arahin'ny famoretana tsy tapaka.
Toa izany amin'ny fiainana andavan'andro:
"Tsy maintsy mitsangana ianao izao, efa ho amin'ny fito ora izao!"
«Izao dia tsy maintsy atao!»
"Nahatonga fahadisoana iray hafa indray aho, tsy nianatra lesona intsony?"
"Tsy afa-mandositra ianao izao, mankahala ny tenanao!"
Hitantsika mazava tsara io fomba fisainana io avy amin'ny fifanakalozan-kevitra nataon'i Jesosy tamin'ny Jiosy. Ary hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy:
"Raha mitoetra amin'ny teniko ianareo, dia ho mpianatro marina tokoa ka hahalala ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo." Hoy izy ireo: “Terak’i Abrahama izahay, ka tsy mbola nanompo; ahoana no ilazanao hoe: ho afaka ianao? Jesosy namaly azy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny mpanompo kosa tsy mitoetra ao an-trano mandrakizay, fa ny zanaka kosa mitoetra ao mandrakizay. Koa raha ny Zanaka no nanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo.” (Jaona 8,31-36).
Rehefa nanomboka niresaka momba ny fahafahana i Jesôsy, dia niondrika avy hatrany ny mpihaino azy tamin'ny toe-javatra nisy ny mpanompo na andevo. Ny mpanompo dia mifanohitra amin'ny fahalalahana, toy izany. Tsy maintsy atao tsy an-kanavaka, dia voafetra ihany. Saingy Jesosy dia manery ny mpihaino azy hiala tsy ho sarin'ny fahalalahana. Nino ireo Jiosy fa afaka izy ireo, saingy tamin'ny andron'i Jesosy dia firenena nalain'ny Romana izy ireo ary talohan'ny nanjakan'izy ireo matetika dia teo ambany fanjakan'ny firenena vahiny ary na dia tamin'ny fanandevozana aza.
Ka ny tian'i Jesosy holazaina tamin'ny fahafahana dia tsy nitovy tamin'ny zavatra takatry ny mpihaino. Ny fanandevozana dia misy fitoviana sasany amin'ny ota. Izay manota dia andevozin'ny ota. Ireo izay te-hiaina ao anatin'ny fahafahana dia tsy maintsy esorina amin'ny vesatry ny ota. Amin'ity lafiny ity, mahita ny fahafahana i Jesosy. Ny fahalalahana dia zavatra avy amin'i Jesosy, manao izay azo atao, izay atolotry azy, izay trosainy. Ny fehin-kevitra dia ny hoe i Jesosy mihitsy no naneho ny fahafahana, fa afaka tanteraka izy. Tsy afaka manome fahafahana ianao raha tsy manafaka ny tenanao. Ka raha mahatakatra ny toetran'i Jesosy tsara kokoa isika, dia hahatakatra ny fahalalahana kokoa isika. Ny andalana manaitra dia mampiseho amintsika ny toetoetran'ny toetran'i Jesosy.
« Ary izany toe-tsaina izany dia mitoetra ao aminareo rehetra, tahaka ny tao amin'i Kristy Jesosy koa, fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza Izy (na toetra araka an'Andriamanitra, na toetra araka an'Andriamanitra), dia tsy hitany ho toy ny fandrobana tokony hohazonina an-keriny ny fitoviana amin'Andriamanitra. fananana sarobidy); tsia, nanafoana ny tenany izy (ny voninahiny) tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo, niditra tao amin'ny olombelona ary noforonina ho olombelona tao amin'ny lalàm-panorenany ara-batana "(Pilipper 2,5-7).
Ny toetra lehibe nasehon'i Jesosy dia ny fanafoanana ny toerany masina. "Namoaka" ny voninahiny izy ary nandao an-tsitrapo an'io hery sy voninahitra io. Nesoriny io fananana sarobidy io ary izany indrindra no nahatonga azy ho Mpanavotra, ilay mamela, ny manafaka, izay mahatonga ny fahalalahana afaka manampy ny hafa amin'ny fahafahana. Io fandavana ny tombontsoa io dia toetra iray tena lehibe amin'ny fahalalahana. Tsy maintsy niatrika lalina an'io raharaha io aho. Ohatra roa avy amin'i Paoly no nanampy ahy tamin'izany.
"Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny kianja filalaovana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka? Moa ve ianareo mihazakazaka amin'ny fomba hahazoanao azy! Fa izay rehetra te-handray anjara amin'ny fifaninanana dia mipetra-potsiny ny fifandraisana rehetra, dia ny hahazo fehezam-boninkazo tsy mety simba, fa isika kosa ny tsy mety ho lo”1. Korintiana 9,24-25).
Nametraka tanjona ny mpihazakazaka iray ary te hanatratra izany. Mandray anjara amin'ity hazakazaka ity koa izahay ary ilaina ny fanafoanana. (Ny fandikan-teny hoe Hope for All amin'ity andalan-teny ity dia miresaka fanesorana) Tsy vitan'ny hoe fanariana kely fotsiny, fa momba ny "fadiana amin'ny fifandraisana rehetra". Tahaka ny nandavan'i Jesosy be dia be mba hahafahana mampita fahalalahana, dia antsoina koa isika mba hiala betsaka mba hahafahantsika mizara fahalalahana. Nantsoina amin'ny làlan'ny fiainana vaovao isika izay mitondra amin'ny fehiloha tsy mety simba izay maharitra mandrakizay; voninahitra tsy manam-piafarana na ho ringana. Ny ohatra faharoa dia mifandray akaiky amin'ilay voalohany. Voalaza ao amin'io toko io ihany.
"Tsy olona afaka va aho? Tsy Apostoly va aho? Tsy efa nahita an'i Jesosy Tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny Tompo va ianareo? Moa izahay Apostoly tsy mahazo mihinana sy misotro?" (1. Korintiana 9, 1 sy 4).
Eto i Paoly dia mamaritra ny tenany ho olona afaka! Notsipihany ny tenany ho toy ny olona iray izay nahita an'i Jesosy, toy ny olona iray mihetsika amin'ny an'ity mpanafaka ity ary manana valiny hita mazava tsara koa haseho. Ary amin'ireto andininy manaraka ireto dia milazalaza ny zony izy, tombontsoa iray izay azony, toa ny apôstôly sy ny mpitory hafa rehetra, dia ny fahazoany mivelona amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa afaka mahazo vola amin'izany izy. (Andininy 14) Saingy nolavin'i Paoly izany tombontsoa izany. Tamin'ny fanaovana tsy nisy dia namorona toerana ho an'ny tenany izy, ka nahatsapa ho afaka ary afaka niantso ny tenany ho olona afaka. Nahatonga azy nahaleo tena bebe kokoa io fanapahan-kevitra io. Notanterahiny tamin'ny paroasy rehetra io lalàna io, ankoatry ny paroasy any Filipy. Navelany hikarakara ny fahasalamany ara-batana ity fiarahamonina ity. Ao amin'ity fizarana ity anefa, dia mahita andalana iray isika izay toa somary hafahafa ihany.
"Fa rehefa mitory ny famonjena aho, dia tsy misy antony tokony hireharehako amin'izany, satria teren'ny fanerena aho; loza ho ahy raha tsy mitory ny famonjena aho!" (Andininy 14).
Paul, amin'ny maha-olona afaka, dia miresaka fanerena, zavatra tsy maintsy nataony! Ahoana no nahatonga izany? Nahita ny fitsipiky ny fahalalahana ve izy? Mieritreritra aho fa te-hitondra antsika akaiky kokoa amin'ny fahalalahana amin'ny alàlan'ny ohatra nomeny izy. Tohizanay ny famakiana ao:
"Satria raha manao izany amin'ny sitrapoko aho dia mahazo karama; fa raha tsy nahy aho, dia fitantanan-draharaha ihany no ankinina amiko. Inona no karamako? ny hafatry ny famonjena dia atolotro maimaimpoana, mba tsy hampiasako ny zoko hitory ny filazantsara, satria na dia mahaleo tena (afaka) amin'ny olona rehetra aza aho, dia efa nanao ny tenako ho andevon'izy rehetra. mba hiarovana ny ankamaroany, fa izany rehetra izany dia nataoko noho ny hafatry ny famonjena, mba hahazoako anjara amin'izany koa" (1. Korintiana 9,17-19 sy 23).
Nahazo asa avy tamin'Andriamanitra i Paoly ary fantany tsara fa tsy maintsy manao izany Andriamanitra; tsy maintsy nataony izany, tsy afa-mihetsika amin'izany. Hitan'ny tenany amin'ny maha mpitandrina na mpitantana azy ny tenany fa tsy mitaky karama. Tamin'ity toe-javatra ity kosa, dia nahazo toerana malalaka i Paul, na teo aza izany faneriterena izany dia nahita toerana malalaka ho an'ny fahafahana izy. Nolaviny ny onitra ho an'ny asany. Izy aza nanao ny tenany ho mpanompo na andevo amin'ny olona rehetra. Nahay nifanaraka tamin'ny toe-javatra izy; sy ny olona izay nitoriany ny filazantsara. Tamin'ny fandavany ny onitra dia afaka nahatratra olona maro hafa izy. Ireo olona izay nahare ny hafany dia nahita mazava fa tsy nifarana ny tenany, ny fanararaotana na fitaka. Avy ety ivelany dia toa nitovy tamin'ny olona iharan'ny fanerena sy fanoloran-tena tsy tapaka i Paul. Saingy tsy nofatorana tao anatiny i Paoly, nahaleo tena izy fa afaka. Ahoana no nahatonga izany? Andao hiverenantsika fotoana kely eo amin'ny andalan-teny voalohany vakiantsika.
Jesosy namaly azy hoe: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay rehetra manota dia andevon'ny ota; ny mpanompo tsy mitoetra ao an-trano mandrakizay, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakizay" (Jaona. 8,34- iray).
Inona no tian'i Jesosy holazaina amin'ny hoe "trano"? Inona no dikan'ny trano aminy? Ny trano iray dia maneho fahatsapana filaminana. Andeha hotadidintsika ny tenin'i Jesosy fa trano maro no homanina ao an-tranon-drainy ho an'ny zanak'Andriamanitra. (Jaona 14) Fantatr'i Paoly fa zanak'Andriamanitra izy, tsy andevon'ny ota intsony. Amin'ity toerana ity dia azo antoka izy (voaisy tombo-kase?) Ny fanilihany ny onitra tamin'ny asany dia nampanakaiky azy bebe kokoa tamin'Andriamanitra sy ny fiarovana izay Andriamanitra irery no afaka mampita. Niasa mafy ho an'io fahalalahana io i Paul. Ny fandavana ny tombontsoa dia zava-dehibe tamin'i Paoly, satria tamin'io fomba io no nahazoany fahalalahana masina, izay naseho tamin'ny fiambenan'Andriamanitra. Tamin'ny fiainany teto an-tany dia niaina an'io fiarovana io i Paul ary nisaotra an Andriamanitra hatrany noho izany ary tamin'ny alàlan'ny taratasiny miaraka amin'ireo teny ireo "Ao amin'i Kristy" nanondro. Fantany tsara fa ny fahalalahana avy amin'Andriamanitra dia tsy nahavita tamin'ny alàlan'i Jesosy nandà ny fanjakany.
Ny fanafoanana ny fitiavana ny namana dia ny lakilen'ny fahalalahana tian'i Jesosy holazaina.
Ny zava-misy io koa dia tokony hiharihary amintsika isan'andro. I Jesosy, ny apostoly sy ny Kristiana voalohany dia nanome ohatra ho antsika. Hitan'izy ireo fa hanova faribolana lehibe ny fandikana azy ireo. Betsaka ny olona voakasiky ny fandavany ny fitiavana ny hafa. Nihaino ny hafatra izy ireo ary nanaiky ny fahalalahana avy amin'Andriamanitra, satria nijery ny ho avy, toa ny nataon'i Paul:
"... fa ny tenany, ny zavaboary, dia ho afaka amin'ny fanandevozan'ny tsy fahatanterahana mba (handray anjara amin'ny) fahafahana izay hananan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny toetry ny voninahitra. ary miandry fahateraham-baovao amin'ny fanaintainana, fa tsy izy ihany, fa ny tenantsika koa, izay efa manana ny Fanahy ho santatra, dia misento ato anatintsika eo am-piandrasana ny maha-zanaka, dia ny fanavotana ny aintsika. "(Romana 8,21- iray).
Nomen'Andriamanitra ny zanany io fahalalahana io. Ampahany iray manokana izy izao azon'ny zanak'Andriamanitra. Ny fandavoana izay ataon'ireo zanak'Andriamanitra ho an'ny asa soa dia mihoatra noho ny fanonerana amin'ny fiarovana, ny tony ary ny fahatoniana izay avy amin'Andriamanitra. Raha tsy manana izany fiarovana izany ny olona iray, dia mitady fahaleovan-tena izy, ny fandroahana tsy misy dikany ho toy ny fanafahana azy. Te hamaritra ny tenany izy ary miantso azy ho fahafahana. Firy ny fahaterena efa nateraka tamin'io. Fijaliana, filàna ary fahafaham-po nipoitra noho ny tsy fahalalàna ny fahalalahana.
“Tahaka ny zaza vao teraka, izay maniry ronono manan-tsaina tsy misy loto (azo ataontsika hoe fahalalahana ronono izany) mba hitomboanareo amin’ny fahasambarana amin’ny alalan’izany ho amin’ny fahasambarana, rehefa samy hafa ny fahatsapanareo fa tsara ny Tompo. Sarobidy amin'ny olona, ​​fa voafidy eo anatrehan'Andriamanitra, ary aoka haorina tahaka ny vato velona ho trano fanahy (izay itoeran'izany fiarovana izany), ho amin'ny fisoronana masina hanao sorona ara-panahy (izany hoe fandavana) izay ankasitrahana. ho an’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy!” (1. Petrus 2,2-6).
Raha miezaka ny hanana fahalalahana avy amin'Andriamanitra isika, dia mitombo amin'ity fahasoavana sy fahalalana ity.
Farany, tiako ny hanonona fehezan-teny roa avy amin'ny lahatsoratra izay nahitako ny aingam-panahy tamin'ity toriteny ity: «Ny fahafahana dia tsy ny tsy fisian'ny teritery, fa ny fahaizana manatanteraka tsy noho ny fitiavana ny namana. Izay mamaritra ny fahafahana ho toy ny tsy fisian'ny famoretana dia manakana ny olona tsy hiala amin'ny filaminana sy ny fandaharan'asa faharesena.
Ny fahafahana dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny sakana